Content Delivery Network (CDN) ဆိုတာဘာလဲ? | Myanmar Web Store
Content Delivery Network ဆိုတာကတော့ သင့်၏ မူလ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် ရှိနေသော server နှင့် သင်ရဲ့ website ကို လာရောက်လည်ပတ်သူတို့ကြား ဒေတာများကို အပြန်အလှန်ဖလှယ်ပေးနိုင်သော Network တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Content delivery Network သည် website မှာရှိသော static data များကို သိမ်ဆည်းပေးထားပြီး visitor များက website ကို လာရောက်လည်ပတ်သောအခါ static data အတွက် origin server ထိသွားရန်မလိုဘဲ CDN မှ တစ်ဆင့်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
အသုံးပြုသူသည် ပထဝီအနေအထားအနေဖြင့်မည်မျှပင်ဝေးကွာနေပါစေ CDN သည်သူ၏ တောင်းဆိုမှုများကို အနီးဆုံးနေရာမှ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သောကြောင့် website ၏ performance မှာ သိသိသာသာ မြန်လာပါသည်။
ဥပမာ အနေနှင့် ပြောရလျှင် သင်၏ဝဘ်ဆိုက်အကြောင်းအရာ ကိုလက်ခံသည် မူရင်းဆာဗာ သည် US တွင်ရှိသည်ဆိုပါစို့ သို့သော် သင်website ထံလာရောက်လည်ပတ်သောသူသည် များသောအားဖြင့် Myanmar နိုင်ငံက ဖြစ်မည်ဆိုလျှင် သုံးစွဲသူများမှ စာမျက်နှာတစ်ခုတောင်းဆိုတိုင်း US မှရှိသော server ထံသို့ပို့ရပြီး သူ၏တောင်းဆိုမှုများသည် US မှတစ်ဆင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ပထဝီ တည်နေရာအနေဖြင့် အရမ်းဝေးကွာသော နေရာ နှစ်ခုကြား ဒေတာပေးပို့ခြင်းနှင့် ရယူခြင်းကို လုပ်ရသောကြောင့် ကိုယ်ရဲ့ website သည် အတော် လေး နေမည်ဖြစ်သည်။
Myanmar visitor သည်သင်၏ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်ကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလိုသည့် အခါတိုင်း တောင်းဆိုချက်ကိုအပြီးသတ်နိုင်ရန် အောက်ပါအချက်နှစ်ချက်က အကျိုးသက်ရောက်စေပါသည်။
၁. Myanmar မှUS အထိ စုစုပေါင်းအကွာအဝေး
၂. တောင်းဆိုချက်ကိုလုပ်ဆောင်ရန်လမ်းကြောင်းပေါ်ရှိ router တစ်ခုစီမှကြာမြင့်ချိန်
မူလဆာဗာသည်တောင်းဆိုမှုကိုလက်ခံရယူရန်ကြာမြင့်ချိန်နှင့် ၊ ၎င်းလက်ခံရရှိသည့် အကြောင်းအရာများကိုပြန်လည်ပေးပို့ရန် ကြာမြင့်ချိန်သည် အလားတူဖြစ်သည်။ ဒီလည်ပတ်မှု ခရီးစဉ်ကို မီလီစက္ကန်နဲ့တိုင်းတာပြီး RTT (round trip time)လို ခေါ်ပါသည်။
CDN ၏အဓိကရည်မှန်းချက်မှာ latency (Data မပို့ခင်မှာ ပို့ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များအတွက် ကြာမြင့်ချိန်) နှင့် RTT (round trip time) ကိုလျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။
CDN ကိုတကမ္ဘာလုံးဖြန့်ဝေနေသောဆာဗာများမှပြုလုပ်သောကြောင့် Myanmar visitors များကသင်၏အကြောင်းအရာများကိုတောင်းဆိုသည့်အခါတိုင်း CDNကိုအသုံးပြုထားတဲ ဆိုလျှင် သူတို့သည် content များကို US မှတစ်ဆင့်လက်ခံရရှိမည်မဟုတ်ပဲ Myanmar နိုင်ငံအတွင်းရှိ CDN ကိုရေးဆွဲထားသော server မှတစ်ဆင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ မှတ်သားရမှာကတော့ CDN အတွက်အသုံးပြုထားသော server သည် static content တွေကိုသာ သိမ်ဆည်းပေးထားပြီး Dynamic Content တွေဆိုလျှင်တော့ မူလ Server ဆီသို့သွားယူရပါသည်။
CDN ကိုရေးဆွဲထားသောဆာဗာများ၌ သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာကို cached version အနေနှင့် သိမ်းဆည်းပေးထားပြီး၊ အသုံးပြုသူက တောင်းဆိုသည့်အခါတိုင်း၎င်း cached version content တွေကိုလျင်မြန်စွာနှင့် လုံလုံခြုံခြုံ ပြန်ပေးနိုင်ပါသည်။
CDN ကိုရေးဆွဲထားသောဆာဗာများသည် နိုင်ငံတိုင်းတွင်ရှိပြီး၊ ဒီလိုနည်းလမ်များကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကျွန်တော်တို့သည် latency နှင့် Round Trip Time (အသွားအပြန်ကြာချိန်) ကို လျှော့ချနိုင်ပါသည်။
Improving website load times – ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့လာရောက်လည်ပတ်သူများကို CDN server သည်ပိုမိုနီးကပ်စွာ content များကိုဖြန့်ဖြူး‌‌ပေး‌သော‌‌ကြောင့် visitorsများ သည် web page များ ကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ CDNသည် Site ကို loading အရမ်းကြာနေခြင်းမှ ‌‌ရှောင်ရှားပေးနိုင်သော‌ကြောင့် ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်ပိုမိုမြန်ဆန်လာပြီး Visitor များသည် ပိုမိုကြာရှည်စွာရပ်တည်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Reducing bandwidth costs – Website hosting တစ်ခု၏ Bandwidth အသုံးပြုခြင်းအတွက်ပေးရသောကုန်ကျငွေသည် များပါသည်။ CDN သည် caching and အခြား optimizations လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဆောင်ရွက်ပေးသောကြောင့် bandwidth consumption ကိုလျှော့ချပေးနိုင်ပြီး website hosting အတွက်ပေးရသော ကုန်ကျငွေမှာလည်း လျော့နည်းစေမည်ဖြစ်သည်။
Increasing content availability and redundancy – များစွာသော traffic (website တွင်အသွားအလာရှိခြင်း) သို့မဟုတ် ဟာ့ဒ်ဝဲပြတ်တောက်မှုများသည်ပုံမှန် ၀က်ဘ်ဆိုဒ်၏ လုပ်ဆောင်မှုကိုနှောင့်ယှက်နိုင်ပါသည်။ သူတို့၏ဖြန့်ဝေထားသောသဘောသဘာဝအရ CDN သည် traffic များစွာကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရုံသာမက hardware ချို့ယွင်းမှုမှာလည်း များစွာ‌သော မူရင်းဆာဗာ များထက်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
Improving website security – CDN သည် DDoS attack ကို ‌‌လျှော့ချပေးနိုင်ခြင်း ၊ လုံခြုံရေးလက်မှတ်များတိုးတက်မှုနှင့် အခြားတိုးတက်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်များကို ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် လုံခြုံရေးကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်ပါသည်။
See More Posts- Click Here
Like and Follow Our Facebook- Myanmar Web Store